तीनकुनेमा अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माणको योजना ब्युँतियो – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/तीनकुनेमा अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माणको योजना ब्युँतियो
तीनकुनेमा अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माणको योजना ब्युँतियो
१६ असार, काठमाडौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा-३२ को तीनकुनेमा अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माण गर्ने योजना ब्युँताएको छ । जनप्रितिनिधि निर्वाचित हुनुअघि नै बनेको योजना अब अघि बढाउन लागिएको हो ।
हामीले जतिसक्दो छिटो तीनकुनेको विवाद अन्त्य गर्ने र पार्क निर्माणको कामलाई अघि बढाउने उदेश्यका साथ प्रारम्भिक अधिकारी तोकेका थियौँ । प्रारम्भिक अधिकारीले सम्वन्धित निकायलाई प्रतिवेदन बुझाई सक्नु भएको छ । साथै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेको प्रारम्भिक अधिकारीले सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ, उनले भने,’हामीले डिजाइन तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । समस्या समाधान हुने वित्तिकै काम तिव्र गतिका साथ अघि बढ्छ ।’
मैले तीन कुनेको जग्गाका बारेमा विवाद भएको, ३५ रोपनी मध्ये २१ रोपनी जग्गाको मुअब्जा दिइसकेको, नेपाल सरकारले पठाएको १५ करोड मध्ये १० करोड ८० लाख वितरण गरेको बाँकी रकम फिर्ता पठाएकोलगायतका विषय समावेश गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको छु,’ अधिकारीले भने, ‘म प्राविधिक व्यक्ति नभएकाले प्रतिवेदनमा त्यहाँको जग्गाको मुअब्जा दिन बाँकी रहेको र हाल साविक गरेर अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको जग्गाको एकिन तथ्याङ्क निकाल्न नापी र मालपोतसँग समन्वय गर्न पनि आग्रह गरेको छु ।’
सोही अनुसार २०६४ माघ १४ देखि ६६ माघ मसान्तासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले २१ रोपनी ११ आना २ पैसाको जग्गा धनीलाई मुअब्जा रकम दिएको थियो । बाँकी जग्गा धनीले मुआब्जा रकम बुझ्न नमानेपछि २०७० साल साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई बाँकी रकम फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि पनि लामो समय त्यो विवाद त्यत्तिकै रहेको थियो । अहिले सरोकारवाला निकायहरुसँग निरन्तर छलफलहरु भइरहेका महानगरपालिकाले जनाएको छ । Source: Onlinekhabar
पो’खरा’बाट मु’स्ता’ङको मु’क्ति’नाथ सम्म के’बल’कार
अहिले यी पुराना नोटको भाउ लाख भन्दा पनि बढी छ ! भयकोले तुरुन्तै यसरी बेचौं ! कहाँ कसरी ? बेच्ने तरिका..हेर्नुहोस्”!!